Iko Adobe SiteCatalyst inorasikirwa neStam? | Martech Zone
Iko Adobe SiteCatalyst inorasikirwa neStam?
Chipiri, Gunyana 2, 2012 China, Kukadzi 25, 2016 Douglas Karr
Tine vatengi vashoma paAdobe SiteCatalyst… asi ini handina chokwadi chekuti vangani vanonyatsoda pachikuva uye vangani vanoronga kuichengeta. SiteCatalyst, seimwe analytics mapuratifomu, gumisa huwandu hwekushanya kwavanozochengeta dhata pa - kukanganisa kukuru kune chero munhu ari kukosora mari hombe yehurongwa hwebhizinesi. Uye sezvo Adobe akavamedza, hazviratidzike sekambani imwechete.
Ini ndaida kuziva nezve izvi uye ndikatarisa dzimwe nzira dzekutsvaga. Sezvo tarisiro nevashandisi vanoshandisa chikuva, ivo vanowanzo tsvaga ivo zvakanyanya. Mune ino kesi, Site Catalyst uye Omniture yekutsvaga inoita kunge iri kufamba ichidzika pasi. Pasina mubvunzo kuti Google Analytics iri kutsenga vese vevatengesi ava - asi Omniture yanga yakasiyana kwenguva yakati rebei. Vashandi vavo vehunyanzvi vaikodzera kudyara sezvo ivo vakaramba vachibatsira vatengi vavo kukura. Handina chokwadi kuti zviri kuitika futi.
Vendor agnostic vanachipangamazano seni angangodaro haabatsire, chero. Ini handina basa nekushanda neSiteCatalyst, asi vatengi vatinavo havasi kunyatsoita chero chinhu chinoshamisira nacho. ChaCha akaita kumwe kuongorora kwakanakisa nedunhu reiyo peji kuitira kuti vazive zvirimo zvaikwezva nekuchengetedza vashanyi vazhinji… asi kunyange izvo zvaigona kuitwa neGoogle kana zvichidikanwa.
SiteCatalyst inopa yakasimba mafoni, yemagariro uye vhidhiyo kusangana… asi izvo hazvisi chaizvo musiyano futi futi. Chinhu chimwe icho SiteCatalyst chaigona kuonekwa semuchinjisi wemutambo mafashama ebasa:
Intuitive mushandisi interface - Zivisa makiyi ekushambadzira epamhepo nekukurumidza uye nyore.
Yechokwadi-yenguva kuwanikwa - Tsvaga data kubva kune yako iPad. Bhura, swipe, uye zoom mune yakatarwa nguva nguva. Wedzera matsva matsva kana email mishumo nekubata kuri nyore.
Zvoga sarudzo - Seta otomatiki ziviso yezvinoitika zvinokonzeresa kana makiyi metriki anopfuura kana kuwira pasi pezvaitarisirwa
Unofungei? Wanga uri kambani here yakasiya Adobe SiteCatalyst? Analytics chinhu chaunodyara mairi futi? Mune mawonero angu, zvishoma nezve papuratifomu uye zvakawanda nezve iyo kambani inobatsira iwe kubudirira. Sezvo ndashanda zvakananga nevanhu kuWebtrends, ndinoziva kuti vane hanya zvakadii nevatengi vavo. Kushanda nevatengi veSiteCatalyst, handina chokwadi chekuti ndakambotaura nemaneja account yeAdobe!
Tags: kupiswaadobe sitecatalystomnituresitecatalyst
Ticky: Rakareruka, risingadhuri SaaS Vatengi Rutsigiro
Chenjera Kuchengeta Akawanda Google Analytics Zvinyorwa
Kugadzirisa Makombiyuta Portland
Gumiguru 2, 2012 na2: 12 PM
Ini ndichave ndakatendeseka, ndinofunga Adobe iri kurasikirwa nevhu nekuda kweiyo Adobe Flash nyaya. Kunyange ini ndichiziva kuti mawebhusaiti ari kufamba kubva pane izvi, kuchine akawanda anofanirwa kubata. Iwe une vakawanda vakavhiringidzika vashandisi kunze uko. Nepo mapakeji ekugadzira ari akanaka… kutakurwa kwandinonzwa kuri kukanganisa mamiriro ezvinhu
Gumiguru 16, 2012 pa 7:03 AM
Ndiwo maitiro akanyatsoonekwa chokwadi. PaLVMetrics, tinoshanda zvakanyanya nevatengi vari kuwedzera kuona kugona kweGoogle Analytics kana yaiswa uye ichishandiswa nemazvo. Iko kufunga hakusati kuri kwemutengo zvakare, zvinoita sekunge kuziva kuti kune ruzivo rwakawanda chete runogona kupedzwa zvine mutsindo kubva kuWeb Analytics chishandiso uye nekudaro, Google Analytics inoshanda zvakanaka. Ane Simba Maapplication anogona kuvakwa pachishandiswa Google Analytics API inosanganisira yevashanyi level analytics - chimwe chinhu icho Omniture yagara ichiratidzira seyakasarudzika nzvimbo yekutengesa. Sarudzo inonyatso kudzika kusvika pakuenzanisa pakati pe 'kunze kwebhokisi' maitiro eSC, vs. limited GA tracking + zvishoma zvekubvunza, data mashiripiti uye ETL. Iyo yekupedzisira inokunda maoko pasi.